UKambole unethemba lokushayela iChiefs amagoli - Impempe
UKambole unethemba lokushayela iChiefs amagoli
January 7, 2021 Impempe.com
Umgadli weKaizer Chiefs, uLazarous Kambole, uthi akuzuba lula ukushintsha amagiya babuyisele imiqondo kwiPremier Soccer League (PSL) ngemuva kokuyibamba kwiCAF Champions League.
IChiefs izobhekana neMaritzburg United emdlalweni weDStv Premiership, eFNB Stadium, ngoMgqibelo ntambama. Iya kulo mdlalo nje iChiefs isanda kudlulela emidlalweni yamaqoqo yeChampions League ngemuva kokushaya iPrimeiro de Agosto yase-Angola ngo 1-0 ngoLwesibili ekuhambeni.
“Ngijabule ngomphumela weChampions League. Sidlulele esigabeni samaqoqo nokuyinto enhle kakhulu. Bekunzima e-Angola kodwa silwile. Ukwina lo mdlalo kusinike ukuzethemba okukhulu,” kusho uKambole.
Uthe umdlalo wabo neTeam of Choice ngeke ube lula neze.
“Umdlalo weMaritzburg uzobe uhlukile kunalo esiwudlale kwiChampions League. I-PSL inesitayela sayo esihlukile sokudlalwa kwebhola. Nokho sizilungiselele, sizolwa njengasosha,” kubeka uKambole.
Lo mgadli waseZambia akakafiki ezingeni abebhekwe ukuthi afike kulona selokhu esayine kuMakhosi ngemuva kokushaya into ecokeme kwiCosafa Cup. Uthe uyakwazi lokho kodwa akalilahlile ithemba.
“Kumele ngisebenze ngokuzimisela ngokuphindiwe. Ngikholwa wukuthi ngisemgudwini kahle. Ngosizo loMdali ngizoqala ngiwashaye amagoli.”
BeyiChiefs bazi kahle ukuthi iMaritzburg izofika ihambela phezulu kubona, kulandela ukushaya kwayo iBloemfontein Celtic emdlalweni odlule. ITeam of Choice ibiqala ukuwina umdlalo kule sizini.
“Njengoba bephuma ekuwineni bagqugquzeleke kakhulu. Akungabazeki ukuthi bazofika kithina benokuzethemba,” kusho uKambole.
IChiefs izobe iqala ukubhekana no-Ernst Middendorp selokhu echithwe yiqembu ekupheleni kwesizini edlule. UMiddendorp usanda kufika kwiTeam of Choice kulandela ukukhonjwa indlela kuka-Eric Tinkler ngenxa yemiphumela engemihle.
“Kuzoba umdlalo ozosithinta kakhulu emphefumulweni kodwa umsebenzi, wumsebenzi. Sizokhuluma enkundleni kanobhutshuzwayo,” kuphetha uKambole.
Egcina ukuhlangana la maqembu emdlalweni wePremiership ngesizini edlule, iMaritzburg yamangaza iChiefs iyiphuca amaphuzu amathathu eFNB Stadium.
Previous Previous post: UMalesela ufisa baqinise iqembu ngabadlali abambalwa
Next Next post: U-Rhoo noMbazo besese ngokubuyela kukaTau e-England